သက်ဝေ: ကျွန်မ ကစားဖြစ်သော ဂိမ်း (သို့) Hay Day
Evy July 4, 2013 at 1:15 PM
အဲဒီ ဂိမ်းအကြောင်းကြားဖူးတာ ကြာပြီ.. တစ်ခါမှတော့ မဆော့ဖူးသေးဘူး...:)
ကျနော်က အဲဒီဂိမ်းကစားတာကိုရပ်ထားတာ ၃ လ ကျော်သွားပြီ။။ စကစားတုန်းက သဘောင်္ပေါ်ကို အကုန်ကူညီတောင်းလို့ရတယ်.. နောက်ပိုင်းကျတော့ ကွန်တင်နာ ၃ လုံးပဲ တောင်းလို့ရတော့ အလုပ်မအားတဲ့ချိန်ဆို သဘောကလွတ်လွတ်သွားရေ.. သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သူတို့မှာ ရှိပေမယ့် ၃ လုံးထက် ကူမရဖြစ်လို့ :)
ဆုမြတ်မိုး July 4, 2013 at 2:04 PM
လယ်ဗယ်နှစ်ဆယ်ကျော်မှာတစ်နေတုန်းပါပဲ .. မပြည့်စုံသေးတဲ့အပြင် ဖုန်းက စက်ရုပ်ဖုန်းဖြစ်နေတော့ သမီးကောင်လေးဆီကငှားဆော့ရပါတယ်း(
မိုင်း ကို ပိုက်ဆံအများကြီးနဲ့ဝယ်ထားပေမယ့် ဗုံးတွေ ၊ ဂေါ်တွေမရှိလို့စိန်တွေမရှာနိုင်သေးဘူး ပြီးတော့ေ၇ွှထုတ်စက်ဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံစုတုန်း ငါးဖမ်းလှေကဈေးကြီးလွန်းလို့ ပိုက်ဆံစုတုန်းပါပဲ တီသက်ရယ်..။ စကားမစပ် သာမီး hay day မှာ တီသက်မပေါ်တာထောက်ရင် တခြား facebook နဲ့များဆော့သလားလို့ပါ :P
ဆုမြတ်မိုး July 4, 2013 at 2:05 PM
အော..မေ့လို့ ခွေးလေးတစ်ကောင်လည်းရှိနေပြီး)
NangNyi July 4, 2013 at 4:56 PM
အင်တာနက်ရမှ ကစားလို့ရတာလည်း ထည့်ပြောဦးလေ.. အဲ့ဟာကို ဆော့ချင်လျက်နဲ့ အဲ့တခုကြောင့် ဆော့မရဘူး. မုန်းတာ =(
Khine Oo July 4, 2013 at 7:00 PM
pandora July 5, 2013 at 9:11 AM
ကြည့်စမ်း.. မိဘက အင်ဂျင်နီယာ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင် ပညာသင်ပေးထားတာ.. သူက နိုင်ငံခြားရောက်မှ လယ်စိုက် ကြက်မွေး နေတယ်ပေါ့ :P
တန်ခူး July 13, 2013 at 12:26 AM
အပေါ်က ပန့် ကော်မန့် ကို ပြုံးမိတယ်. သက်ဝေ ရေ အညွှန်းကောင်း အရေးလေးလဲကောင်းတော့ ကစားချင်သွားတယ်. ခုလောလောဆယ် ဂိမ်းတွေဖြတ်ထားတာ တခါတခါပဲ သားလိုတာလေးတွေပေးချင်လို့dragon story ကစားဖြစ်တယ်. ဖုန်းထဲကစားတာမို့ဖုန်းလဲရင်သက်ဝေလို ချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ်စုဆောင်းတာလေးတွေပြောင်ပြောင်သွားလို့စိတ်နာပြီးခဏရပ်ထားတာ
Mr.Administrator July 24, 2013 at 1:42 AM
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ဆော့ကြည့်လိုက်တာ ခုတော့ ဆွဲနေပြီ :D